CRD oo qiimayn ku samaysay Baarlamanka Cusub ee Soomaaliya.
waxaa todobaadkan lagu soo gaba gabeeyay magaalada London dood cilmiyeed ay soo qaban qaabiyeen Soomaalida ku nool dalka Britain oo ku saabsan natiijada kasoo bixi karta shirka dib u heshiisiinta soomaaliyeed oo la filayo in 10ka October lagu doorto madaxwaynaha dalka Soomaaliya.
Doodan oo lagu marti qaaday Gudoomiyaha Xarunta Cilmi baarista ee loo yaqaano CRD Cabdiqaadir Yaxye oo Fadhigoodu yahay magalaada Muqdisho waxaa ka soo qayb galay Arday , Odayaal iyo Aqoonyahano Soomaaliyeed oo ku nool dalkan.
Ugu horayntii waxaa uu sheegay Gudoomiyaha in shirka Soomaalida ay ka soo bixi doonto dawlad Soomaaliyeed Mudo 24 bilood kadib, iyadoo ay ku baxday shirkaasi dhaqaale lagu qiyaasay 34 Million oo Doolarka Maraykanka ah.
Xarunta CRD waxaa ay Baarlamanka ku qiimaysay ayuu yiri gudoomiyaha sidatan:
1- 30% in ay yihiin xildhibaanadu kuwii Carta lagu soo doortay.
2- 30% in ay yihiin Xildhibaano ay Taageerto Ethiopia.
3- 40% in ay yihiin xildhibaano Dhexdhexaad ah.
Waxaa kaloo dadkii halkaasi joogay ay soo gudbiyeen fikrado ay ku sheegayeen in badan oo kamid ah baarlamanka Cusub in ay codkooda ku badalanayaan dhaqaale 30 maalmood uun ku filan.
Intaasi waxaa uu ku daray in loo kala bixi doono Guulaystayaal iyo ma guulaystayaal Baarlamanka , waxaana taasi ay keeni kartaa hadsii aanay waxba helin in badan oo ka mid ah hogaamiyayaasha kooxaha in ay caqabad ku noqon karaan nabadda soomaaliya ee curatay.
Dawladda Cusub waxyaabaha Laga rabo in ay qabatao.
1- Dib u heshiisiin wixii ka khaldamay xukuumadii carta iyadoo raadinaysa dhamaan dadka aan laga maarmin.
2- Beesha Caalamka oo looga baahan yahay taageero siyaasadeed , ciidan iyo mid dhaqaale iyadoo xiligan ay muuqato in aysan jirin dhaqaale ku filan oo loo diyaariyay.
3- Cabsi galin Caalami ah iyo in maxkamada la hor-keeno cidii xad gudubta.
4- Taageero ka timaada dhanka Shacabka.
hadii aan waxyaabahaas waxba laga qaban way adagtahay in ay dawlada cusubi guulaysato xiligan masiirkii umada Soomaaliyeed loo dhiibay Hogaamiyayaasha kooxaha iyo dawladaha dariska oo dhaqaalo badan ku hela dawlad la'aanta ka taagan Soomaaliya oo sanad walba ku hela 600 Million Doolar iyadoo 60% lacagtaasi ay ku harto Kenya.
Doodaasi waxaa fikrado kala duwan kasoo jeediyay ka soo qaybgalayaashii oo runtii inta badan fikirkan qaba inkasta oo qaarkood ay dhinacyo kale oo ka duwan dhibaatooyinka sida lagu xalin karo ay soo gudbiyeen.
Faafin: SomaliTalk.com | Sept 28, 2004 | Sixid: Sept 29, 2004
Gen Morgan oo Warsaxaafadeed ka soo Saaray Dagaaladii Jubbada Hoose
iyo Kulankii Baarlamaanka oo lagu magacaabay guddiyo, sida G/nidaaminta doorashooyinka Guji...